Botswana | Akụkọ Njem
Otu n'ime ebe kachasị njem safari n'Africa bụ Botswana n'ihi oke anụ ọhịa nke bi ebe a. Rhinos na antelopes mmiri na nnukwu nwamba na nkịta ndị nọ n'ihe ize ndụ Africa na-agagharị na mba Africa a. Agbanyeghị, ọ bụrụ na enwere ihe kpatara Botwana ji ama ụwa niile ọ bụ n'ihi na enwere ike ịchọta enyí karịa ebe ọ bụla ọzọ na kọntinent ahụ.
Ọ bụrụ na anyị ebiri na anụmanụ ndị bi na ha, anyị ga-agbakwunye na ọ bụ ala nke Okavango Delta na Kalahari ọzara, ebe otu n'ime ọgbụgba nkume kachasị elu n'ụwa dị, anyị kwubiri na Botswana bụ otu n'ime mba ndị kachasị mma na ụwa. Anyị na-achọpụta ihe niile Botswana nwere inye, na post na-esonụ.
3 Ọzara Kalahari
4 Ndị San
5 Ogige Ntụrụndụ Chobe
6 Data nke mmasị
Isi ihe mere ị ga-eji gaa Botswana bụ safaris mana ọ na-atọ ụtọ mgbe niile ịhụ Gaborone. N'agbanyeghị na ọ bụ obodo kasị ukwuu na mba ahụ, ọ na-adọrọ mmasị na ọ bụ otu n'ime isi obodo kachasị pere mpe n'Africa na ebe nwere ọgụgụ isi. Ọ bụ obodo jupụtara ebe obibi, ebe ịzụ ahịa, ụlọ gọọmentị, na ebe ngosi ihe mgbe ochie na-atọ ụtọ. Banyere onyinye gastronomic, na Gaborone ọ dị ezigbo iche. Ihe kachasị nwee ike ịnwe ikpuru mopane.
Mpaghara ahụ, akọwapụtara dị ka "Kalahari diamond", bụ olulu mmiri nke dị iche na mkpochapụ izugbe nke mba ahụ na otu n'ime obere usoro mmiri dị n'ime ụwa enweghị ụzọ mbanye n'oké osimiri. A na-ahụkarị ọdịdị ala ya na akụ na ụba ya site na ikuku, ọ bụ ezie na obi nke delta nwere ike iru jeep.
Otu dị iche iche nke pachyderms nke na-agagharị na njedebe nke ókèala ya, ìgwè atụ nke na-agba ọsọ na mmiri doro anya ya, ma ọ bụ giraffes na-agagharị n'etiti acacias bụ ọhụụ pụrụ iche nke obere eluigwe na ala nke ọnwa isii nke afọ jupụtara na mmiri. Nke a bụ isi ihe mere eji chebe Okavango Delta nke ọma.
Ọzara a gafere Botswana, Namibia na South Africa na ndò nke agbata obi ya Namib. A maara ya dị ka ọzara na-acha ọbara ọbara n'ihi ụcha nke ájá ya na n'agbanyeghị ọnọdụ ya dị oke njọ, ọdụm, meerkats, òké, giraffes na antelopes, n'etiti ụdị ndị ọzọ, bi na Kalahari. Ebe ihu igwe dị mmiri mmiri karị, na mgbago ugwu, mmiri ozuzo na-enye shrubby savanna na oke ọhịa kiaat.
Mpaghara mara ezigbo mma nke ọzara Kalahari bụ mpaghara nke ihe dịka square kilomita iri ebe a na-echekwa ihe osise eserese 4.500 nke ndị San obodo mere. Arefọdụ dị afọ 24.000 ma kee ha dị ka onyinye nye chi.
N'ikwu okwu banyere ndị San, ọnụnọ ha laghachiri afọ 20.000 na mpaghara ndịda Africa. Otu n'ime ọmarịcha ahụmahụ anyị nwere na Botswana bụ ịnọnyere ndị mbụ biri na ndịda Africa. Onye nke ọtụtụ ndị njem na-ewere dị ka isi obodo Botswana na Kalahari, Ghanzi, nwere ebe a na-ese ihe na ụlọ ahịa nke ndị omenkà San, na-atọ ụtọ.
Otu n'ime anụ ọhịa anụ ọhịa kachasị na kọntinent a bụ ebe a. Ahụmịhe nke ịkwọ ụgbọ mmiri mgbe anyanwụ dara na mmiri dị jụụ nke Osimiri Chobe, nke kewara Botswana na Namibia, na ìgwè nnụnụ na-efegharị na mbara igwe na ìgwè enyí ndị na-agagharị. otu n'ime ahụmahụ kacha echefu echefu ị nwere na Botswana.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Botswana